တစ်အစီရင်ခံ Tool ကိုအဖြစ်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
ဒါဟာသုတေသနပိုမိုလွယ်ကူစေသည်, သင်မူကား propertly အသုံးပြုပုံကိုသိရန်ရှိသည်
အဟောင်း fogy တူသောအသံများ၏အန္တရာယ်မှာ, ငါ့ကိုကကြိယာခဲ့ "အကြောင်း Google တွင်ရှာဖွေ" ဖြစ်မှီကာလ၌သတင်းထောက်ဖြစ်တူဘာကိုရှင်းပြကြကုန်အံ့။
အဲဒီအချိန်တုန်းကသတင်းထောက်များကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သတင်းရင်းမြစ်ရှာဖွေမည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့ကြသည် သူတို့ကိုအင်တာဗျူး (အင်တာနက်မတိုင်မီကျနော်တို့ပင်အီးမေးလ်ကရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, သတိရပါ) လူတစ်ဦးအတွက်သို့မဟုတ်ဖုန်းကျော်ကဖြစ်စေ။ သင်တစ်ဦးပုံပြင်များအတွက်နောက်ခံပစ္စည်းလိုအပ်လျှင်, သင်ဘယ်မှာသတင်းစာရဲ့ morgue, check လုပ်ထား ကလစ်ပ် အတိတ်ကိစ္စများမှသည်ပုံစံတင်ပို့ရန်ဗီဒိုထဲမှာသိုထားခဲ့ကြသည်။
ယနေ့ခေတ်, သင်တန်း, သောသူအပေါင်းတို့သည်ရှေးခေတ်သမိုင်းပါပဲ။ မောက်၏ကလစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်ထိပုတ်ပါနှင့်အတူ, စာနယ်ဇင်းသမားများအွန်လိုင်းအချက်အလက်များ၏နီးပါးန့်အသတ်ပမာဏမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ထူးဆန်းအရာများစွာကိုဖြစ်ပါတယ် အယောင်ဆောင်သတင်းထောက်တွေကို ငါမြင်ငါ၏အသတင်းစာပညာအတွက်အတန်းသင့်လျော်စွာတစ်အစီရင်ခံ tool အဖြစ်အင်တာနက်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲကိုသိရန်မထင်ကြဘူး။ ဤတွင်ကျွန်မတွေ့မြင်သုံးခုအဓိကပြဿနာများနေသောခေါင်းစဉ်:
Web ကို မှစ. ပစ္စည်းအပေါ်အရမ်းအပြည်အစုံတပ်ဆင်ထားသောမှီခို
ဒါကဖြစ်ကောင်းငါမြင်အသုံးအများဆုံးအင်တာနက်ကို-related အစီရင်ခံပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ငါအနည်းဆုံး 500 စကားလုံးများကိုဖြစ်ကြောင်းဆောင်းပါးများကိုထုတ်လုပ်ရန်ငါ၏အသတင်းစာပညာသင်တန်းများအတွက်ကျောင်းသားများအတောင်းသည်စာသင်အနည်းငယ်ရိုးရှင်းစွာဝက်ဘ်ဆိုက်များအမျိုးမျိုးကနေသတင်းအချက်အလက် rehash ကြောင်းပုံပြင်များတင်ပြရန်။
ဒါပေမယ့်ဒီကနေပျေါပေါကျကြောင်းကိုအနည်းဆုံးနှစ်ခုပြဿနာတွေရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာ, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်မူရင်းအစီရင်ခံမဆိုလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်သင်၌အရေးကြီးသောလေ့ကျင့်ရေးရတဲ့မဟုတ်ပါဘူး အင်တာဗျူးများပို့ချ ။
ဒုတိယအချက်အသငျသညျများ၏အန္တရာယ်ကို run plagiarism ကျူးလွန် , သတင်းစာပညာအတွက် Cardinal အပြစ်တရား။
အင်တာနက်ကနေယူသတင်းအချက်အလက်တစ်ခုအဖြည့်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မူရင်းအစီရင်ခံများအတွက်မအစားထိုးဖြစ်သင့်သည်။ ကျောင်းသားတစ်ဦးသတင်းစာဆရာသည်သူ၏ပါမောက္ခသို့မဟုတ်ကျောင်းသားသတင်းစာတင်သွင်းခံရဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာမိမိ byline ကိုထည့်လေ့မရှိသည့်အခြေအနေမဆိုအချိန်, ထိုယူဆချက်ဇာတ်လမ်းအများအားဖြင့်မိမိအလုပ်အပေါ်အခြေခံကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကအားဖြင့်အင်တာနက်ကိုပယ်ကူးယူသို့မဟုတ်စနစ်တကျစွပ်စွဲမကြောင်းအရာတစ်ခုခုအတွက်လှည့်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်အရေးကြီးသောသင်ခန်းစာထဲကကိုယ့်ကိုကိုယ်လိမ်နှင့် plagiarism တစ်ခုက "F" ရတဲ့၏အန္တရာယ်အပြေးနေကြသည်။
ထိုအခါဆန့်ကျင်ဘက်ပြဿနာရှိသည်သောကျောင်းသားများကိုရှိပါတယ် - သူတို့ကသူတို့ရဲ့ပုံပြင်များများအတွက်အသုံးဝင်သောနောက်ခံသတင်းအချက်အလက်ပေးနိုင်သည့်အခါအင်တာနက်သုံးစွဲဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။
သို့သော်ဤကဲ့သို့သောဇာတ်လမ်းလည်းအခြေအနေတွင်နှင့်နောက်ခံသတင်းအချက်အလက်အဘို့အော်ဟစ်။ ဥပမာအားဖြင့်အဘယ်စျေးနှုန်းတိုးဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းဂလိုဘယ်ရေနံစျေးကွက်များတွင်ဖြစ်ပျက်သလဲ? တိုင်းပြည်အနှံ့, သို့မဟုတ်သင့်ပြည်နယ်အတွင်းရှိဓါတ်ငွေ့၏ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းကဘာလဲ? ဆိုလိုသည်မှာအလွယ်တကူအွန်လိုင်းတွေ့နိုင်ပါသည်သတင်းအချက်အလက်များ၏ကြင်နာင်နှင့်သုံးစွဲဖို့ဿုံသင့်လျော်သောပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသတင်းထောက်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အင်တာဗျူးအပေါ်အများစုမှီခိုကြောင်း laudable ရဲ့, ဒါပေမယ့်သူမဟာရေတိုပြောင်းလဲနေတဲ့သူမ၏ဆောင်းပါးပိုပြီးကောင်းစွာ-rounded စေနိုင်ကြောင်းဝဘ်မှသတင်းအချက်အလက်လျစ်လျူရှုကိုကိုယ်ပါပဲ။
စနစ်တကျက်ဘ်ကနေသိမ်းယူပြန်ကြားရေး Attribute ပျက်ကွက်
သင်အွန်လိုင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေအများကြီးသုံးပြီးသို့မဟုတ်ရုံအနည်းငယ်နေကြသည်ဖြစ်စေ, သင်အမြဲအရေးပါမယ့် စနစ်တကျသင်အသုံးပြုသတင်းအချက်အလက်များ attribute ဘယ် website မဆိုမှ။
သင်ကိုယ်တိုင်၌စုဝေးကြပြီမဟုတ်ကြောင်းမဆိုဒေတာ, စာရင်းဇယား, နောက်ခံသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ကိုးကားကမှ လာ. ဝက်ဘ်ဆိုက်မှအသိအမှတ်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, သငျ့လျြောသောထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအကြောင်းကိုရှုပ်ထွေးဘာမှမရှိဘူးပါပဲ။ ဥပမာအားဖြင့်သင့်ထံမှယူသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုကိုအသုံးပြုနေလျှင်, The New York Times , ရိုးရှင်းစွာ "The New York Times သတင်းစာအရသိရသည်" ကဲ့သို့တစ်စုံတစ်ခုရေးရန်သို့မဟုတ် "The New York Times သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့သည် ... "
ဝက်ဘ်ဆိုက်များသုံးစွဲဖို့သတင်းထောက်လုံလောက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတွေဟာဘယ်ဟာများနှင့်အရာဆိုဒ်များသူမကရှင်းလင်းခုတ်မောင်းသင့်တယ်: ဤသည်အခြားပြဿနာမိတ်ဆက်? ကံကောင်းထောက်မစွာ, ငါသောအရာသည်အလွန်ခေါင်းစဉ်ပေါ်တွင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးထားလျက်ရှိ၏င့် သင်ဒီမှာရှာတှေ့နိုငျ ။
ဒီဇာတ်လမ်း၏ကိုယ်ကျင့်တရား? သင်ပြုမဆိုဆောင်းပါး၏အမြောက်အများသင့်ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံခြင်းနှင့်သူများအားအင်တာဗျူးအပေါ်အခြေခံပြီးရပါမည်။ သို့သော်ဘယ်အချိန်မဆိုသင်ကထိုကဲ့သို့သတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးခပ်သိမ်းသောအမူအရာအားဖြင့်, ဖြစ်လျှင်, web ပေါ်မှာနောက်ခံသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူတိုးတက်လာနိုင်မယ့်ပုံပြင်ကိုလုပ်နေတာ။
ရုံစနစ်တကျပြုလုပ် attribute မှသေချာပါစေ။
သင့်ရဲ့သတင်းစာပညာအလုပ်ရှာဖွေရေး Start မှအဆိုပါသုံးအကောင်းဆုံးနေရာများ
ယနေ့တွင် Do ဂျာနယ်လစ်မျက်နှာအဘယ်အရာကိုထုတ်ဝေ?
မာတင်လူသာကင်း, အကြမ်းမဖက်ခြင်း, သက်သတ်လွတ်
အဘယ်ကြောင့်သင်က cheerleader တဦး Be စေချင်သလား?
အကြားအမြင်ရ Reader ကိုအယောင်ဆောင်များရှောင်ကြဉ်ဖို့ကိုဘယ်လို
နက္ခတ္တဗေဒ 101: ခေတ်သစ်နက္ခတ္တဗေဒ
တစ်ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများ Reactant ကန့်သတ် calculate ကိုရန်ကဘယ်လို
Captain America: ပြည်တွင်းစစ်ကြီး
ဟာကြူလီ 12 အလုပ်သမားရေးရာ Perform ဖို့ခဲ့အဘယ်ကြောင့်
ဘတ်ဂျက် Line နဲ့လစျြလြူရှု Curve အလေ့အကျင့်ပြဿနာများ
တစ်ဦး ESL / EFL ပြင်ဆင်မှုအားအတွက်သဒ်ဒါကိုဆုံးမဩဝါဒပေး
ကို '80s ၏ထိပ်တန်းသက်တံ့ရောင်သီချင်းများ
ဟောငျး Hag Syndrome ဆိုတာဘာလဲ?
တရာနှစ် '' စစ်ပွဲ: အင်္ဂလိပ် Longbow
ဥရောပက Grand Tour